फुटबल हेर्न इरानी महिला बने पुरुष |
फुटबल हेर्न इरानी महिला बने पुरुष
प्रकाशित मिति :2018-05-11 15:33:52
ललितपुर । इरानी महिलाहरूले फुटबल खेलमा उपस्थित हुन अपनाएको अनौठो प्रकृयाको खुलासाले धेरै मानिसहरूको ध्यान आकर्षण गरेकोे छ ।
गत शुक्रबार ईरानमा केही महिलाहरूले नक्कली कपाल र दाह्री प्रयोग गरेर आफूलाई पुरुषको भेषमा प्रस्तुत गरे । ताकी उनीहरूको टिम पोलिसको खेल तेहरानको आजादी रंगशालामा हेर्न सकुन् ।
रङ्गशालामा बसेका ती महिलाहरूका तस्विरहरू पर्सियन र अंग्रेजी सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यापक रुपमा प्रचार गरिए ।
हुनत इरानमा महिलाहरूलाई खेलकुद हेर्न जान आधिकारीक रुपमा निषेध त गरिएको छैन । तर पनि प्रायजसो महिलाहरूको प्रवेश इन्कार गर्ने वा नरुचाईने गरिएका कारण महिलाहरू विरलै मात्र सहभागी हुन्छन् ।
तस्विरमा भएका महिलाहरू मध्य एक महिलाले यस्तो चाल चलेको यो तेस्रो पटक हो । उनले एक स्थानीय पत्रिकालाई भनेअनुसार उनी हरेक पटक फरक–फरक भेषमा खेल हेर्न जाने गर्दथिन् ।
‘मैले फरकफरक मेकअपका बारेमा गुगलमा खोजेँ, नयाँ तरिकाहरू सिकेँ र रङ्गशालामा जान ती विधिहरूको प्रयोग गरें,’ उनले भनिन् । उनले उक्त पत्रिकासँगको कुराकानीमा भनिन्, ‘उनी सुरक्षकर्मीबाट एक पटक मात्र रोकिएकी थिइन् । उनले अरु महिलाहरूलाई सम्पर्कमा रहन प्रोत्साहित गरिन् र भेष बदल्ने प्रविधीहरू सिकाउने प्रस्ताव समेत गरिन् ।’
कहिल्यै समातिने डर थियो कि भन्ने प्रश्नमा उनले उत्तर दिइन्, ‘म किन डराउने ? हामी महिलाहरूले रङ्गशालामा गएर कुनै अपराध गर्दैनौ । कानुनले रगंशालामा महिलाको उपस्थितीलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरेको छैन । तर पनि तिनीहरूले केही महिलाहरूलाई रोके र फेरि फर्केर त्यहाँ नजाने लिखित बाचा गराए ।’
तर सबैजना खुसी थिएनन् । ‘किन तिमी गएर महिलाको खेल हेर्दैनौ ? पुरुषको रङ्गशालामा किन जानु प¥यो ? अर्को एक जनाले प्रतिक्रिया दिएका छन् ।